Ekpere ka ihe niile gaa nke ọma. ? N'ebe ọrụ na ikpe.
Kpee ekpere ka ihe niile wee gazie n'ụlọ ọrụ ma ọ bụ ọnwụnwa ọ bụ omume nke okwukwe n'ezie.
Ọtụtụ mgbe ekwenyere na ọ bụ ihe enweghị ike ma ọ bụ na ọ na-egosi adịghị ike ma ọ bụ enweghị ike ịme ihe n'onwe anyị, mana nke a abụghị eziokwu.
Mkpa nkwado Chineke na-egosi na anyị bụ mmụọ nke mmụọ ma na anyị chọrọ ka mmadụ niile nọrọ n'okwu metụtara anyị ma ọ bụ n'ihi na anyị ga-amalite azụmahịa ọhụrụ.
Ihe kachasị dị mma bụ ime ekpere a ugboro atọ n'ụbọchị, ịnwere ike ịgbatị ya ụbọchị ịchọrọ.
O nwere ike zuru ezu na naanị ụbọchị atọ ma ọ bụ arịrịọ ị nwere ike ịchọ ụbọchị ole na ole.
Eziokwu bụ na naanị ihe achọrọ maka ekpere ka ọ rụọ ọrụ bụ okwukwe e jiri ya mee.
1 Ekpere maka ihe niile ka ọ gara nke ọma - Nzube
1.1 Ekpere ka ihe niile na-aru oru
1.2 Ekpere ka ihe niile wee na-aga nke oma na nnwale
1.3 Ekpere ka ihe niile na-aga n’ihu n’ọrụ
2 Ogologo oge ole ka ekpere a na-ewe iji rụọ ọrụ?
Ekpere maka ihe niile ka ọ gara nke ọma - Nzube
Ebumnuche nke ahịrịokwu a bụ ihe doro anya na enwere ike iji ya n'ọnọdụ niile enwere ike.
Ọtụtụ oge anyị na-amalite ọrụ ọhụrụ nke anyị na-ejighi n'aka na narị pasent mana anyị ka chọrọ ịnwale, n'ihi na n'ọnọdụ ndị a ekpere Ọ dị mkpa
Asrịọ Chineke ka o duzie anyị n'ihe anyị na-eme ma ọ bụ ka o nyere anyị aka ime ihe ziri ezi na ihe dị mkpa.
Mmeghari ohuru nwekwara ike ịbụ na ngalaba ọmụmụ, ebe amara Chineke bara uru mgbe niile.
Ma ọ bụ anyị nwere ike ịrịọ na oke kachasị enyere anyị aka ịga n’ihu mmekọrịta nke na-ewere ọnọdụ adịghị njọ na mberede.
Na fon, a na-ekpe ekpere ka ihe ọ bụla na-aga nke ọma nwere ike itinye n'ọrụ n'ọtụtụ oge.
Enwere ike ịme ya na ezinụlọ dum ma otu a, ịbụ ebe ha na-arịọ otu nzube, ekpere na-esikwu ike karị.
Cheta na okwu Chineke kwuru na ọ bụrụ na mmadụ abụọ ma ọ bụ atọ kwenye ma jụọ Chukwu, ọ ga-emere arịrịọ ndị a.
Ekpere ka ihe niile na-aru oru
“Chineke m, a na m arịọ na mgbe ị batara n’ọrụ m na ịdị adị gị dị, a na m arịọ gị ka m kelee gị maka ụbọchị ọhụrụ a ị na-enye m. A na m arịọ ka ọ bụrụ ụbọchị udo ma jupụta n’amara gị, ebere gị, ịhụnanya gị na ihe niile na-eme dịka atụmatụ gị zuru oke.
Taa, a na m arịọ ka a rụzuo ọrụ m niile, a na-arụzu echiche m, ọbụnadị obere ihe na-enweghị isi na ndụ m na ọrụ m so na aka gị dị ebube.
Onyenwe anyị Jizọs, gọzie ọrụ m, ndị isi m, ndị ahịa m, ndị ọrụ ibe m na ndị niile na-eme ka ụlọ ọrụ a nwee ọganihu.
Nna nke Elu-igwe, mee m uche m na ike m ịrụ ọrụ m n'ụzọ kacha mma.
Daybọchị a, a chọrọ m obi nwere obi ọma ijere ndị ahịa m na ndị ọrụ ibe m ebere. Onye-nwe, nye m ọnụ ọchị, na-enwe nchekwube na anya na-elele ihe niile ha na-ahụ gburugburu gị.
Wepu okwu ojoo na iwe ma mee m ezigbo mmadu.
Nye m aka abụọ ka m na-arụ ọrụ ịsọpụrụ ezinụlọ m oge niile, nye m ịnụ ọkụ n’obi iji bulie m ọchị kwa ụbọchị site na ịmụmụ ọnụ ọchị.
Onye-nwe, duzie m n’oge ọ bụla m chere na m na-efufu ugwu, bụrụ ike m na obi ike m, nye m obi nwere obi ike dịka nke gị.
Nna nke Elu-igwe, mee ka ubochi a na ubochi obula diri nke kachasi nma, napu m n'aka gi.
Onwere gburugburu oru ma obu ihe nlere aka oru ohuru nke choro inweta enyemaka kari.
Rịọ maka ihe niile na-aga n’ihu n’ọrụ Ọ bụ ekpere na enwere ike ịme ya ụbọchị niile, tupu ịpụ n'ụlọ.
Ezigbo ọdịnala anyị nwere ike itinye n'ọrụ n'ụlọ bụ ikpe otu ekpere ụbọchị tupu ịhapụ mmadụ niile n'ụlọ n'ụtụtụ.
N'ụzọ a, anyị na-enyere ụmụ aka ma ọ bụ ndị na-esighi ike n'okwukwe obi ịtụkwasịkwu n'ike nke ekpere.
Ekpere ka ihe niile wee na-aga nke oma na nnwale
“Onye ikpe gọziri agọzi, nwa Meri, ka a ghara ibocha ọbara m ma ọ bụ wụfu ọbara m. Ebe ọ bụla m gara, aka gị na-ejide m.
Ndị chọrọ ịhụ m nke ọma nwere anya ma ha ahụghị m, ọ bụrụ na ha nwere ngwa agha anaghị emerụ m ahụ, yana ikpe na-ezighị ezi ha anaghị edu m.
Ejiri m uwe mwụda ahụ kpuchie Jizọs ugbu a ejiri m kpuchie, ka m wee ghara imerụ ahụ ma ọ bụ gbuo m, agaghị m edobe mmeri nke ụlọ mkpọrọ. Site na nrutu nke Nna, Ọkpara na Mọ Nsọ.
Iche ikpe nke ikpe bu oge nlebara anya na nlebara anya nke ikpere ka ihe nile wee rue nke oma puru inyere aka.
Inwe ike tinye ike a na-ezighi ezi ma nwee ike ime ka ndị ziri ezi nọrọ na gburugburu ebe a na-elebara ihe niile ekwuru ma na-eme anya n'ọnọdụ dị oke egwu ga-abụ nzọpụta anyị.
I nwere ike ikpe ekpere tupu na n’oge ikpe ahụOmume a ga-enyere anyị aka ime udo na ime ezi mkpebi.
Ekpere ka ihe niile na-aga n’ihu n’ọrụ
Oh Jizọs, ị bụ ezi okwu, ị bụ ndụ, ọkụ, ị bụ ụzọ anyị, Jizọs, Onyenwe m m hụrụ n'anya, onye kwuru: "Rịọ, a ga -enye gị, chọọ, ị ga -ahụ, kụọ aka. a ga -emeghere gị, »maka ịrịọ arịrịọ nke Meri nne gị a gọziri agọzi, a na m akpọ, ana m achọ, a na m arịọ gị n'ekele niile ka ị nye m ihe m chọrọ ngwa ngwa: (Kwuo ihe ịchọrọ imeta). Kpee Nna anyi ato ekpere ha, tolo oyuyo nke ato.
O Jesu, I bu Okpara nke Chineke di ndu, I bu Onye akaebe Chukwu kwesiri ntukwasi obi na ụwaỊ bụ Chineke nọnyere anyị, Jizọs Onyenwe ndị nwenụ, onye kwuru sị "Ihe ọ bụla ị rịọrọ Nna n'aha m, ọ ga -enye gị" site na ịrịọ arịrịọ nke Meri, nne gị a gọziri agọzi, ana m eji obi umeala na obi m niile na -arịọ nnukwu okwukwe. Nna n'aha gị ka i meere m amara a nke na -esiri m ike inweta site n'ụzọ m na -adịghị ike: (Tinyegharịa na nnukwu olile anya ihe ịchọrọ inweta). Kpee Nna anyi ato ekpere ha, tolo oyuyo nke ato.
Oh Jesus, I bu Nwa Meri, Gi bu onye mmeri nke ihe ojoo na ọnwụỊ bụ mmalite na ọgwụgwụ, Jizọs, Eze ndị eze, onye kwuru sị: «Eluigwe na ụwa ga -agabiga, mana okwu m agaghị agabiga» site na ịrịọ arịrịọ nke Meri, Nne gị a gọziri agọzi, enwere m ntụkwasị obi zuru oke na enweghị m olileanya. A ga -enye arịrịọ: (Kwuo ihe ọzọ ị chọrọ).
Tupu ịbanye n'ime ụlọ ọrụ ahụ, egwu dị mgbe niile na amaghị nke ihe nwere ike ime, ọ bụ ya mere ikpee ekpere ka ọrụ ahụ na usoro niile dị mma ji dị mkpa.
Ndị a kacha akwadoro bụ kpee onye ahụ ekpere tupu gị abanye n'ụlọ ịwa ahụ, ị ga-ajụrịrị nke ọma ma na-eduzi ihe anyị chọrọ ịhụ.
Na njedebe, ọ dị mma ikele, n'ụzọ dị otu a ka a na-esi ekesa ume dị mkpa na usoro ahụike niile.
Ogologo oge ole ka ekpere a na-ewe iji rụọ ọrụ?
Ekpere anaghị enwe oge.
Dị ka ọ na-adịkarị, dabere n'ọnọdụ ahụ, enwere ike iwe nkeji ole ma ọ bụ awa ole na ole n'ọrụ.
Ihe dị mkpa bụ na obi siri gị ike na ị ga-aga nke ọma.
N'ụzọ dị otú a, Ekpere ka ihe ọ bụla na-aga nke ọma na ọrụ, ikpe na arụmọrụ ga-arụ ọrụ ngwa ngwa ma dị irè.